1 Sidee baan u soo kaban karto, tirtiray iMovie Files?
Hi, si qalad ah waan tirtiray qaar ka mid clips iMovie, oo waxaan u maleynayaa sidoo kale waxaan ka bariyeelay aan qashinka. Waxaan isku dayay "burburin Edit", laakiin waxaa soo baxday in aan waxtar lahayn. Clips kuwa run ahaantii waa mid aad u muhiim ii. Ma suroobi karaa waddo ii si aad u hesho dib? Mahad badan.
iMovie waa codsiga video-tafatirka ugu awooda badan ee Mac. Waxaad samayn kartaa wax kasta oo videos aad rabto in aad la. Si kastaba ha ahaatee, aad files iMovie weli lagu lumin karaa sabab u tirtirka weerar aad, virus ama xitaa baadi nidaamka. Haddii aad qabto wax gurmad ah oo ka mid ah aad Mac ama haddii aadan ka bariyeelay aad qashinka Mac, si fudud iyaga ma doonan karo iyada oo aan wax caawinaad ah. Laakiin haddii aan, waxaad u baahan doontaa codsiga soo kabashada iMovie ah ay dib u hanato aad badiyay files iMovie markaas.
Wondershare Data Recovery for Mac waa xalka ugu wanaagsan si aad u soo celin iMovie si fudud oo ammaan ah. Waxay kaa caawinaysaa in aad ka bogsato files tirtiray iMovie ama ka soo kabsadaan iMovie maktabadda 3 kaliya tallaabooyin. No arrin aad files iMovie ayaa laga badiyay sababta oo ah aad u tirtira, formatting ama nidaamka qalad, qalab had iyo jeer ayaa kaa caawin kara.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac ah in la soo celiyo files iMovie hadda!
2 3 Talaabada inay Qabtaan iMovie Recovery
Ka hor inta aanan bilaabin in aan dib u soo kabashada, fadlan ha soo dajiyo codsiga on xijaab ama mugga in files iMovie ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabasho inuu ka soo kabsado maktabadda iMovie
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery for Mac, aad arki doonaa interface bilow bandhigayaa dhowr ah hababka dib u soo kabashada.
Si aad u soo kabsado tirtiray files iMovie, oo aad qaadi karto "lumay Recovery File" sida isku day ah oo hore. Tani waa hab ay awoodaan in ay soo kabsadaan noocyada file oo dhan.
Tallaabada 2 Scan Risaalo ama mugga in files iMovie ayaa laga badiyay ka
Markaas barnaamijka tusi doono oo dhan qoruhu ama muda aad Mac. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah in aad files iMovie ayaa laga badiyay ka oo guji "Scan" button ay soo baadhaan.
Haddii aad files iMovie lumeen sababtoo ah formatting drive, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files iMovie
Ka dib markii iskaanka, ku jira oo dhan ka helay on your xijaab Mac la soo daabici doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxaad ka arki kartaa maktabadda folder iMovie in lagu hubiyo sida badan oo ka mid ah laga badiyay files iMovie la soo kabsaday karo.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan iMovie faylasha aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" in dib u badbaadin aad Mac.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii faylasha kabsaday dib ugu Risaalo ka asalka ah si looga fogaado in xogta overwritten.
Sidee ku darto oo ay wadaagaan iMovie in Lugood Library
Top 5 kale oo iMovie online lacag la'aan ah
> Resource > iMovie > iMovie Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iMovie Files